ကယားနှင့် ချင်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါက ခုနစ်နှစ်အထိ ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ရမည် - Yangon Media Group
ကယားနှင့် ချင်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါက ခုနစ်နှစ်အထိ ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ရမည်
ကယားနှင့် ချင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့်လုပ်ငန်းများကို ခုနစ်နှစ်အထိ ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ခံစားရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဆက်အောင်ကပြောသည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် သန်လျင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလွင်ကို လတ်မေးမြန်းသော ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမရခဲ့သော ကယားပြည် နယ်နှင့် ချင်းပြည်နယ်တို့တွင် နိုင်ငံ ခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဝင်ရောက်လာအောင် ယင်းပြည်နယ်များအတွက် အထူးကင်းလွတ်ခွင့်ပေး၍ ဆောင်ရွက်ရန် အစီအစဉ်ရှိ၊ မရှိ မေးခွန်းကို ရှင်းလင်းစဉ် ဒုဝန်ကြီး ဦးဆက်အောင်က အထက်ပါအတိုင်း ထည့်သွင်းပြောကြားသည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်မှ ယနေ့တိုင် ၂၉ နှစ်တာကာလအတွင်း ကယား ပြည်နယ်၌ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တစ်ခုနှင့် ပြည်တွင်းနိုင်ငံသားရင်း နှီးမြှုပ်နှံမှု သုံးခုသာရခဲ့ကြောင်း ချင်းပြည်နယ်ဆိုလျှင် ၁၉၈၈ ခုနှစ် မှ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အထိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တစ်ခုမှ မရခဲ့သေးကြောင်း ဦးလွင် ကိုလတ်က မေးခွန်းမေးမြန်းစဉ် ထည့်သွင်း ပြောကြားသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြား စီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုယ်စား စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဆက် အောင်က ”မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု ဥပဒေအမှတ် ၇၅ (ကနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁ဝ/၂ဝ၁၇ တို့အရ ကယားပြည်နယ်နှင့် ချင်းပြည်နယ်တို့ရှိ မြို့နယ် အားလုံးမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် စီးပွားဖြစ်စ တင်သောနှစ်အပါအဝင် တစ်ဆက်တည်း ခုနစ်နှစ်အထိဝင်ငွေ ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ကို ခံစားခွင့်ရရှိ မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခြားဖွံ့ဖြိုးမှု အသင့်အတင့်ရှိသော ဒေသများတွင် ဝင်ငွေခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ငါးနှစ်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ ဖွံ့ဖြိုးမှုရှိ သောဒေသများမှာတော့ ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် သုံးနှစ်ဆီသာ ခံစားခွင့်ပြုထားတာဖြစ်သော ကြောင့် အခြားဒေသများထက် ကယားပြည်နယ်နှင့် ချင်းပြည် နယ်များတွင် ဝင်ငွေခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်အား ပိုမိုပေးထားပါတယ်”ဟု ဖြေကြားခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ဒုတိယဝန်ကြီးဦးဆက်အောင်မှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေအရ နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီး မြှုပ်နှံလိုသူများသည် ကယားပြည် နယ်နှင့်ချင်းပြည်နယ်တို့တွင် နှစ် ရှည်မြေငှားရမ်းခွင့်နှင့် ပတ်သက် ၍ အထူးအခွင့်အရေးလည်းပေးထားကြောင်းသိရသည်။ ကယားပြည်နယ်တွင် မကြာ သေးမီကကျင်းပခဲ့သည့် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုဖိုရမ်၏ အကျိုးဆက်အ ဖြစ် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် မေလမှစတင်ပြီး ယနေ့ထိ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာ မှုကဏ္ဍ၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း ၁၁ ခု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုငွေပမာဏ ကျပ်သိန်းတစ်သောင်း နှစ်ထောင် ကိုခွင့်ပြုပေးနိုင်ခဲ့သလို ရင်းနှီးမြှုပ် နှံလိုသည့် ပြည်တွင်းပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်များက လေ့လာတင်ပြမှုများ ရှိလာကြောင်း အလားတူချင်း ပြည်နယ်၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြပွဲကို ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် မတ်တွင်ကျင်းပ သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ဆီးသီးဈေးနှင့် ဆီးစေ့ဆီးဆန်ဈေး ကောင်းနေသော်လည်း အထွက်နှုန်းကျနေ၍ တရုတ်ဝယ်လက်ကိုသာ အားကိ?
မန်စီးတီး၊ မန်ယူအသင်းများနှင့် ငွေ ယှဉ်မသုံးနိုင်ကြောင်း ကွန်တီ ဝန်ခံ
ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ရှိ စတားဘတ်ကော်ဖီတွင် ကင်ဆာ သတိပေးချက်များ ပါရှိရမည်ဟု တရားသူကြီးမ?
ဒိုင်ယာ၏ ဒဏ်ရာကြောင့် ဒီကလန်ရိုက်စ် ပွဲထွက်ခွင့် ရလာနိုင်
ခါးပိုက်နှိုက် ပြစ်ချက်ဟောင်းရှိသူများကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် လူဦးရေထူထပ်ခြင်း၊ တစ်အိမ်တည်းတွင် ကျပ်ညပ်စွာနေထိုင်ကြခြင်းကြောင့် H1N1 ကူးစက်မှုနှင့် သေဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်နေ